Howlgal saakay ka socda Xaafado ka tirsan Baladweyne - Ceelhuur Online
Home > Wararka Maanta > Howlgal saakay ka socda Xaafado ka tirsan Baladweyne
Howlgal saakay ka socda Xaafado ka tirsan Baladweyne
March 3, 2019 March 3, 2019 Cali Yare93
Ciidamo ka tirsan kuwa Booliska Soomaaliya ayaa saakay waxa ay howlgallo ka wadaan Xaafadaha ay ka koban tahay Magalada Baladweyne ee Xarunta Gobolka Hiiraan halkaas oo maalmihii la soo dhaafay ay k adhaceen falal amnidarro.
Wararka aan saakay ka heleyno Baladweyne ayaa waxa ay sheegayaan in ciidamada ay ku jarmaadaeen Xaafadaha Magaalada Baladweyne sigaar ah Xaafada Howl-Wadaag,waxaana sababta lagu sheegay in howlgalkaas uu yahay mid amniga lagu xaqiijinayo maadaama todobaadkii la soodhaafay ay dilal ka dhaceen.
Ciidamada ayaa baaritaano ku sameynaya Guryaha qaar halka Gaadiidka iyo Goobaha Ganacsiga sidoo kale baaritaano ay ku sameynayaan,waxaan adadkaMagalada Baladweyne ay sheegeen in howlgalkaas uu saameyn ku yeeshay isku-socodka dadka iyo Ganacsiga.
Taliyaha Ciidanka Booliska Baladweyne ayaa horay u sheegay in Ciidamada Booliska Baladweyne aysan u dulqaadan doonin dhibaatoyinka amni ee ka dhacaya Magalada Baladweyne,isla markaana ay bilaabayaan holwgallolagu sugayoamniga.
In kastoo welisaraakiisha howlgalka hogaamineysa aysan soo bandhigin waxayabaha ay ku qabteen howlgalkaas ayaa hadana dad ku sugan Baladweyne waxa ay Idaacadda Risaala u sheegeen in howlgalka dhalinyaro farabadan lagu qabqabtay,islamarkaana uu weli socdo.
Galmudug oo ka hadashay Ciidamo la wareegay Madaxtooyadda Cadaado
SAWIRO:Guddoomiye Mursal oo shir uga qeyb galay dalka Jordan
Hay`adda caalamiga ah ee ICAO oo go`aansatay in ay hawada Soomaaliya xirto #ReclaimSomAirSpace
Kenya oo Markale ku celisay in ay xirayso Xeryaha Dhadhaab
February 5, 2019 February 5, 2019 Cali Yare
Koox hubaysan oo Dil ka gaysatay Jaamacad ku taal Dalka kenya
October 10, 2017 October 10, 2017 Cali Yare
Faafaahin Qaraxii ka dhacay Muqdisho.
Maxaa looga hadlayaa Kulanka Maanta Golaha Shacabka?
Gudoomiyaha Hobyo oo ka warbixiyey safaradii uu kusoo maray Dibadda (Daawo)
March 7, 2019 March 7, 2019 admin Comments Off on Gudoomiyaha Hobyo oo ka warbixiyey safaradii uu kusoo maray Dibadda (Daawo)
Dowladda Soomaaliya oo u Jawaabtay Kenya